Ingabe kuzokwazi ukuthola ama-backlink ngo-2018?
Ukwakha izixhumanisi bekulokhu kudlala indima ebalulekile ekuthuthukiseni injini yokusesha. Noma kunjalo, izindlela zokwakha izixhumanisi zishintshiwe unyaka ngamunye. Okukhulu kunazo zonke kuvele ngo-2013 lapho i-Google idala ukubuyekezwa kwayo kwePenguin. Lesi sibuyekezo senze wonke amaphuzu avele, ekhulisa inani lekhwalithi yezixhumanisi ezingenayo futhi ahlukanise zonke izixhumanisi ze-spammy.
Ezinsukwini zethu, ukwakha isixhumanisi kuyinkinga ephikisana kakhulu. Esinye isazi sithi ukubaluleka kwezixhumanisi zangaphandle kunqatshiwe ngenkathi abanye bephikisana nokuthi ukubaluleka kwayo kuqhubeke ngokuqhubekayo eminyakeni. Lezi zingxabano zibangelwa ukuxhunyaniswa kwezixhumanisi zogaxekile, kanye nezibuyekezo eziqhubekayo ze-Google ezishintsha izinto eziza kuqala kule ndawo.
Noma kunjalo, kungakhathaliseki ukuthi uke wazizwa mayelana nokwakhiwa kwesixhumanisi, kusengathinta ngokuqondile isiteji sakho sewebhusayithi. Ayikho iwebhusayithi engakwazi ukubeka phezulu ku-SERP ngaphandle kwekhwalithi nezixhumanisi ezifakiwe ezifanele.
Njengamanje, unyaka we-2017 usuphelile, futhi sisekupheleni kweeholide lika-2018. I-Google isalwa namasu okukhwabanisa okuxhumene ne-spammy kanye nomklomelo ezihlobene nezixhumanisi ezingenayo. Izindlela zokwakha izixhumanisi ze-Spammy ziye zangena ekugqibeleni. Abaningi be-webmasters banquma ukutshala imali yokukhiqiza nokuqukethwe kwesixhumanisi sekhwalithi. Kubangela ukuncintisana okukhulu kule nkambu.
Omunye akakwazi ukusiza kodwa uzibuze ukuthi kuzoba yini izinguquko ezintsha esingazifunda ekukhakheni isakhiwo sokuxhumanisa ngo-2018. Njengomnikazi wewebhusayithi ocebileyo, udinga ukuqaphela ukuthi yini ezosebenza nokuthi yini engekho.
Kulesi sihloko, uzothola izindlela ezizayo zokuqinisekisa ukuthi uhlale ku-TOP yegeyimu yokwenza injini yokusesha.
Kungakanani ukuthola ama-backlink ngo-2018?
Yenza konke ngesandla
Siphila ezweni elizenzekelayo lapho izinto ezidalwa ngesandla ziba nenani eliphakeme,. Qinisekisa ukuthi ubhekisela kubaholi bakho be-niche emakethe ukuze uthole ama-backlink ngaphezulu wekhwalithi. Ungahambi ukwenza ama-imeyili ngokuzenzakalela njengoba bakhangwa njengogaxekile yi-addressee.
Ngaphezu kwalokho, ungawi isofthiwe yokwakha isixhumanisi esizenzekelayo njengoba singathinta kabi izikhundla zakho zesayithi kanye nedumela lomkhiqizo. Ngincoma ngokuqinile ekubhekiseni ochwepheshe be-SEO ochwepheshe abangakha izixhumanisi kusayithi lakho ngesandla.
Izindlela zokwakha izixhumanisi ze-skyscraper
Kuyindlela yokuthandazela okuqukethwe-okushayela isetshenziswa ngabachwepheshe be-SEO ukuthola izixhumanisi kumthombo web. Isekelwe ekutholeni ucezu lwekhwalithi yekhwalithi ku-niche yakho esevele ibhekwa njengomthombo ohloniphekile futhi ifuna amathuba okudala okuqukethwe okungcono ngaphakathi komlayezo ofanayo.
Udinga ukulandelela izincwadi ezintsha zokuqukethwe kwi-niche yakho yemakethe ukuze ufake izixhumanisi zakho lapho. Uma lokhu okuqukethwe kushicilelwe emthonjeni wewebhu ohlonishwayo, kungenzeka ukuthi usuvele unezinga eliphezulu. Yingakho kuyithuba elihle kakhulu ukuthi uthole umsila wokuxhuma emithonjeni yamandla. Ngokwenza okuqukethwe okusekelwe ocwaningweni, ungakwazi ukuphuma kwangempela bese uthole impendulo enhle kuwo Source .